၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ရခိုင်ပြည်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းသုံးသပ်ချက်
May 9, 2020 AASYC 0
News Analysis on Arakan in April, 2020 ၁။ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့၏ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအကြားတွင် တိုက်ပွဲနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အရပ်သားများထိခိုက်သေဆုံမှုများ ယခင် မတ်လတွင် (၃၀) ဦး ရှိခဲ့ရာမှ ဧပြီလတွင် (၄၅) ဦး ထိမြင့်မားလာခဲ့သည်။ ၂။ Read More
March 4, 2020 AASYC 0
Conflict in Burma has reachedalevel of desperation for civilians, particularly those living in northern Rakhine State, who have been forced to flee clashes taking place almost daily. As humanitarian aid workers struggle to meet needs of communities, their operations have been compromised by the world’s longest information blackout in several townships in Rakhine and Chin States. In response, local people challenged the authorities in protest. ND-Burma member organizations have expressed fears for civilian safety as they work to ensure their narratives are heard.
January 6, 2020 AASYC 0
“မြောက်ဦးလူသတ်ပွဲ” အစီရင်ခံစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်။ ရခိုင်ပြည်၊ မြောက်ဦးမြို့၌ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် (၂၂၃) နှစ်မြောက် ရခိုင့်အချုပ်အခြာ အာဏာ ကျဆုံးသည့်နေ့ ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အထိန်းအမှတ်အဖြစ် စာပေဟောပြောပွဲ Read More
29th Assassination Anniversary of Arakanese Historian U Oo Thar Twan – 2019
August 15, 2019 AASYC 0
Today is 14th August, marks the 29th assassination anniversary of U. Oo Thar Twan, We mourn today and he will never be erased from the Read More
Undermining Trust Building: Human Rights Situation During the Northern Ceasefire (January 1 to April 30, 2019)
July 28, 2019 AASYC 0
26 July 2019 In late December 2018, amid ongoing and heavy armed conflict in Kachin and Shan states, the Burma army declaredafour-month unilateral Read More
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအား AASYC မှသုံးသပ်တင်ပြခြင်း
July 21, 2019 AASYC 0
ဇူလိုင် (၁၈)၊ ၂၀၁၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်း ကော် မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီများ အသီးသီးမှ သဘော ထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၁၅) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ တင်သွင်းခဲ့ သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ Read More